नीतिगत स्थिरता भयो भने नेपालमै गाडिहरू उत्पादनको ढोका खुल्छः करण चौधरी| Corporate Nepal
साउन २०, २०७८ बुधबार १५:०८
नेपालका अटोमोवाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोवाइल्स एशोसियशन अफ नेपालमा नयाँ नेतृत्वका लागि आउँदो भदौ २५ गते चुनाव हुँदैछ । कोरोना महामारीको मारमा रहेका अटो व्यवसायीहरू अहिलेको परिस्थितिमा संघको नेतृत्व निर्वाचनबाट भन्दा पनि सर्वसम्मत चयन होस् भन्नेमा धेरै देखिन्छन् । आगामी नेतृत्वका एक दावेदार तथा नाडाका वर्तमान उपाध्यक्ष करण चौधरीसँग कर्पोरेट नेपालले कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारः
नाडा अटोमोवाइल एशोसियशनको नयाँ नेतृत्वका लागि तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष हुनुभयो भने तपाईंको कामको प्राथमिकता के के हुन्छ ?
स्वाभाविकरुपमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग सम्वन्ध कायम राखेर अघि बढ्ने छु । नीति निर्माताहरूसँग निकटको सम्वन्ध बनाएर मुलुकमा सबै अटोमोवाइल व्यवसायीका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि काम गर्नेछु । नाडाले आफ्नो पहुँचलाई प्रदेश तहमा विस्तार गर्नेछ । स्थानीय तहका सरोकारवालासँग निकटको सम्वन्ध बनाएर स्थानीय अटो व्यवसायीका लागि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन प्रहल गर्नेछु ।
तपाईंले त्यासो भन्दैगर्दा कोरोना महामारीको पीडामा रहेका धेरै अटोमोवाइल व्यवसायी आशा र अपेक्षा नाडाको नेतृत्वमाथि हुन्छ । उनीहरूको अपेक्षा र समस्यालाई तपाईं अध्यक्ष हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
अहिले कोरोना महामारीको अवस्था कायम छ । अटो क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं यसबाट प्रभावित भएका छन् । ज्यान गुमाउनु परेको छ । लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूले काम गर्न नपाएको अवस्था छ । चाहे डिलर सञ्चालन गर्ने साथी हुन वा अटोमोवाइल क्षेत्रमा काम गर्ने सामान्य श्रमिक । मेरो पहिलो प्राथमिकता अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन हुनेछ । हामीले अहिले नै त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं । सम्वद्ध मन्त्री र सचिवहरूलाई भेटेर अटोमोवाइल तथा यातायात सेवामा काम गर्ने लाखौं श्रमिक तथा व्यवसायीका समस्या राखेका छौं । उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या, राहत र पुनरुत्थानका कुरा उठाएका छौं । खोप लगाउन प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छौं । यो क्षेत्र कोरोनाले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको मध्ये एक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रलाई नयाँ उत्साह र आकर्षणको जरुरी छ । भोलिका दिन सरकारी पक्षसँग अटोमोवाइल क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणका लागि मेरो ध्यान जानेछ ।
तपाईं अहिले नै पनि नाडाको उपाध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्यकालमा के के गर्नुभयो ? भनेर नाडाको सदस्यहरूले प्रश्न गरे भने के जवाफ दिनुहुन्छ ?
म र नाडाको वर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल हामी दुवै भेहिकल कमिटिमा बसेर एकसाथ मुलुकमा अटोमोवाइल व्यवसायका लागि कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ ? कसरी यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । हामीले के के गर्यौं ? नाडाका साथीहरूले पनि हेरिरहनुभएको छ । मिडियाहरूले पनि लेखिरहेको हुन्छ । नाडा साथीहरू कसैले प्रश्न गर्नुभयो भने म उत्तर दिन सक्छु ।
तपाईंको पक्षमा सर्वसम्मती हुने संभावना कस्तो देख्नुहुन्छ ? त्यसका लागि पहल भएको छ कि छैन् ?
त्यसका लागि पहिला मैले सबैको विश्वास जित्न जरुरी छ । त्यसका लागि म काम गर्नेछु ।
चुनाव हुने अवस्थामा प्यानलसहित प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि ?
हो । पक्कै पनि त्यो बेलामा हामी प्यानलसहित प्रस्तुत हुनेछौं । टिममा नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । तर म अहिले कुनै टिममा छैन् ।
नाडाको सबैभन्दा कान्छो उमेरको अध्यक्ष भएर इतिहास रच्ने इच्छा गर्नुभएको छ । चुनाव जित्ने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मैले भनेजस्तै म मेरो क्षमता देखाउन सक्छु । यो विश्वास मसँग छ । म नाडा अटोमोवाइल एशोसियशनको अध्यक्ष नहुने कुनै कारण देख्दिन् ।
चालु आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत बजेटप्रति तपाईंहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै थियो । तर नयाँ सरकारले यसलाई केही संशोधनको तयारी गरिएको छ । मौद्रिक नीति पनि आउन ढिलाई भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संशोधित बजेट र मौद्रिक नीति कस्तो चाहिन्छ ?
म बजेट र मौद्रिक नीतिको ठूलो आलोचक छैन् । म अगाडि बढ्न उत्साहजनक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु । त्यो बनाउने काम भनेको सरकारको हो । मेरो मात्रै अनुरोध के छ भने बजेट वा संशोधित बजेट र मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई सकारात्मकरुपमा हेरोस् । देशमा काम गरेर खाने वातावरण बनोस् । आर्थिक गतिविधि बढोस् । सँगसँगै कोरोना महामारीबाट पनि जनताको जीवनरक्षा होस् ।
नेपालका अटोमोवाइल व्यवसायी नेपालमै गाडि तथा यसका पार्टपुर्जा उत्पादन गर्न भन्दा पनि आयात गरेर बेच्नमै बढि रमाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म दुई वटाले मात्रै एसेम्ब्लिङ सुरु गरेका छन् । नेपालमा उत्पादन गर्न नीतिगत समस्या मात्रै हो वा पुँजीको हो वा बजारको चुनौति हो ?
नेपालमै गाडि उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार जस्तै हामी पनि चिन्तित छौं । एसेम्ब्लिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्न संभव पनि भएको छ । तर मुख्य समस्या नीतिगत अस्थिरता र अनिश्चितता मुख्य चुनौति बन्दै आएको छ । त्यो खालको नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितताले लगानीको ढोका खोल्छ । नेपालको अटोमोवाइल इन्डष्ट्रिजमा ठूलठूलो लगानी आउँछ । किन भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको मुलुक हो । नेपालमा हुने उत्पादनले आन्तरिक बजारसँगै छिमेक र अन्य दक्षिण एसिया क्षेत्रमै राम्रो बजार पाउँछन् ।
तपाईंले सञ्चालन गरिरहेको सिजी होल्डिङले पनि एसेम्लिङ प्लान्ट राख्ने कुरा सुनिन्छ । के कसरी राख्दै हुनुहुन्छ ?
सही कुरा हो । हामीले त्यसका लागि यसअघि नै विस्तृत रोडम्याप नै बनाएका छौं । मुल्य कुरा त्यही हो नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता ।
सरकारले न्यू इनर्जी भेहिकललाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ । अझै पनि सडकमा पूरानै गाडिको बाहुल्यता छ । अबको १० बर्षमा यसलाई विस्तावित गर्नसक्ने स्थिति छ ?
विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले चालेको कदम प्रसंशनीय नै छ । तर विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार, यसलाई आगामी दिनमा कसरी नीतिगतरुपमा अघि बढाइन्छ र कस्तो पूर्वाधार तयार गन्छि ? भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । समय तालिकाअनुसार काम भए जस्तो मलाई लाग्दैन् । तर पनि व्यक्तिगत आयातकर्ताहरू आफ्नो विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार तयार गर्न प्रयासरत छन् । जनताको चासो पनि यस्तो सवारी साधनमा देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका आधिकारिक वितरक र नेपालभित्रका डिलरहरू एउटै संगठनमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूका वर्गीय समस्या कतिपय मिल्दैनन् । भोलि समस्या हुँदैन् ?
बिक्रेता र डिलरबीच मतभेद हुनसक्छ । तर यहाँ नाडाले व्यक्तिगत लाभका लागि नभई सामुहिक हितका लागि काम गर्छ । सबैका समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छ । नाडाले कसैप्रति भेदभाग गर्दैन् । म सबैसँग मिलेर र सबैलाई मिलाएर सामुहिक हितका लागि काम गर्छु ।
नाडा अटो शो महामारीले गर्दा गएको बर्ष प्रभावित भयो । यस बर्ष हुने संभावना के छ ?
गएको बर्ष कोभिडका कारण नाडा अटो शो आयोजनामा बाधा पर्यो । यो बर्ष पनि राम्रो अवस्था देखिएको छैन् । तर पनि हामी यस बर्ष परिस्थिति सहज हुनासाथै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना र्दै नाडा अटो शो आयोजना गर्न तयारी अवस्थामा छौं ।
तपाईं पूरानो र प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाको मान्छे । अटोमोवाइल क्षेत्रमा तपाईंहरूको लामो अनुभवले नेपालको अटोमोवाइल इन्डष्ट्रिजको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ रु कसरी यसलाई वृहत बनाउन सकिएला ?
अटोमोवाइल विलासिताको नभई आवश्यकताको वस्तु बनेको छ । सवारी साधनबीना हाम्रो व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवन चलाउन नसकिने अवस्था बनिसकेकाले यसलाई विलासिता मान्न हुँदैन् । व्यक्तिको मोविलिटिले मुलुकको अर्थव्यवस्थाको वृद्धिलाई दर्साउँछ । यो सन्दर्भमा अटोमोवाइलको भविश्य अझै राम्रो र उज्जवतिर छ तर निजी सवारी साधनको स्वामित्वका लागि उनुकुल नीतिको आवश्यकता छ ।
नेपालमा गाडि सबै किसिमका छन् । तर सडक छैन । भएका सडक पनि व्यवस्थित र सुरक्षित नहुँदा बर्षेनी हजारौंले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने, अंगभंग हुनुपर्ने अवस्था छ । सडक पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारी नीति ठिक छ त रु सुरुङमार्गमा जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि ?
हाम्रो समग्र पूर्वाधार विकास र यसको व्यवस्थापनमा सुधार जरुरी छ । सुरुङ, फ्लाईओभर, सडक विस्तारलाई वैज्ञानिकढंगले अघि बढाउनु जरुरी छ । हामीले हतार र गुणस्तरहीन विकास गरेर समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न दिन हुँदैन् । उनीहरूमा नकारात्मक सोच विकास गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न हुँदैन् । हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कम श्रम प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । साथै, ट्राफिक नियमबारे आम मानिसमा जनचेतनाको पनि विकास गर्नु जरुरी छ ।